I-Factory Tour - I-Hangzhou Testsea Biotechnology Co, Ltd.
Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle ngabasebenzisi abaningi basekhaya nakwamanye amazwe.
Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle ngabasebenzisi abaningi basekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, sisungula ubudlelwano obuhle bebhizinisi namanyuvesi amaningi asekhaya kanye namabhizinisi wokukhiqiza i-vitro, ngisho nangaseningizimu-mpumalanga ye-Asia, i-Europe, i-Afrika, iLatin America kanye namanye amazwe.
ITestsea inethimba lokucwaninga nokuthuthuka eliholwa
I-Testsea inethimba lokucwaninga nentuthuko eliholwa odokotela namakhosi abanezisebenzi ezinobungcweti kanye nendawo yokusebenza kahle kwemishini. Umthamo wokukhiqiza we-antigen recombinant ufinyelele ku-18g / ngenyanga.
Ubuqotho, Ikhwalithi, Ukuzibophezela
Ukuphishekelwa kweTestsea komqondo "ubuqotho, ikhwalithi, umthwalo" nokulandela ikhwalithi, inhloso yokusebenzela umphakathi nokuthuthukisa njalo izinto ezisezingeni eliphezulu zokuhlonza ngokuzikhandla.
Feline Coronavirus Kit Kit Test , Canine Coronavirus Ag Rapid Test Kit , Kit Sensitive Feline Coronavirus Ag Test Kit , Feline Coronavirus Fcv Ag Test Kit , Canine Coronavirus Ag Test , Feline Coronavirus Test ,